Tsipy kanetibe – “Masters 2016” : niova 100 isan-jato ny ekipa malagasy | NewsMada
Tsipy kanetibe – “Masters 2016” : niova 100 isan-jato ny ekipa malagasy
Mpilalao vaovao avokoa no handeha hiatrika ny “Masters de pétanque”, hatao any Frantsa, manomboka ny volana jona ho avy izao. Tsy nisy voatazona intsony ireo mpilalao nahazo izany teo aloha.
Rakotoarivelo Sylvain Carlos, tompondaka eran-tany amin’ny «tir de précision 2013» sady nandrombaka ny «Masters de Pattaya 2016», Ramaminirina Patrick, tompondakan’i Madagasikara 2015, Raharinosy Taratra, nandrombaka ny “Masters de Pattaya 2016” ary Ratianarison Judicael, tompondaka eran-tany amin’ny “tir de precision 2015”, sokajy “junior”. Ireo no hisolo tena an’i Madagasikara, amin’ny fiadiana ny “Masters de pétanque 2016”, hatao any Frantsa, manomboka ny 1 jona ka hatramin’ny 7 septambra ho avy izao, araka ny daty voatondron’ny mpikarakara.
Niova 100% izany ny mpilalao malagasy handeha hiatrika ity fifaninanana ity. Tsy nisy voatazona intsony mantsy ireo efa niatrika izany, toa an’i Toutoune sy Tiana (Tonerre). Araka ny fantatra, tsy mbola nisy niatrika ity “Masters” hatao any Frantsa ity izy efatra mirahalahy ireo, raha tsy vao amin’ity andiany ity.
Araka ny fepetra notakin’ny Quaterback, mpikarakara sady mpanohana ny “Masters de pétanque”, tsy maintsy mpilalao “elite” sy manana ny fahaiza-manao, salama tsara, afaka mipetraka any Frantsa, mandritra ny telo volana, ary vonona hanaja ny fitsipi-pifehezana, mandritra ny fifaninanana, no miatrika izany. Rehefa natao ny fifantenana, izy efatra mirahalahy ireo no nahafeno ny fepetra, tamin’ireo mpilalao 14 nantsoin’ny federasiona.
Efa manomboka ny fampivondronana sy ny fanazarantena, izay eo ambany fitarihan’ny tale teknika nasionaly. Raha tsy misy ny fiovana, hanainga ny faran’ny volana mey ny delegasiona malagasy.